ဤစာအုပ်၏အဓိကရဝုဏ်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်လူမှုရေးသုတေသနအသစ်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သုတေသီများကယခုအပြုအမူကိုစောငျ့ရှောကျမေးခွန်းတွေမေး, စမ်းသပ်ချက်ကို run နှင့်မကြာသေးမီကအတိတ်ကာလရိုးရိုးမဖြစ်နိုင်ခဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းနိုင်ပါ။ နှင့်အတူဤအသစ်ကိုအခွင့်အလမ်းအသစ်ကအန္တရာယ်များလာ: သုတေသီများသည်ယခုလတ်တလောအတိတ်ထဲမှာမဖြစ်နိုင်ခဲ့နည်းလမ်းတွေရှိလူများထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခွင့်အလမ်းများနှင့်အန္တရာယ်များ၏အရင်းအမြစ်ဟာ Analog စအရွယ်ကနေဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်ဖို့အကူးအပြောင်းသည်။ ဒီအကူးအပြောင်းတကယ်တော့ပြုလုပ်ရသေးပြီးပြည့်စုံသည်မဟုတ်, အားလုံးတပြိုင်နက်ကဲ့သို့ On-နှင့်လှည့်တစ်ဦးအလင်း switch ကိုဖြစ်ပျက်မထားပါဘူး။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ကြီးမားသောအရာတစ်ခုခုပေါ်သွားကြောင်းသိရန်ယခုခြင်းဖြင့်မလုံလောက်ပါဖူး။
ဒီအကူးအပြောင်းသတိထားမိဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌အပြောင်းအလဲများရှာရန်ဖြစ်ပါသည်။ analog ခံရဖို့အသုံးပြုကြောင်းကိုသင်၏အသက်တာ၌အရာများစွာကိုယခုဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူကင်မရာကိုအသုံးဖို့အသုံးပြုပေမယ့်ယခုသင် (ဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့ smart ဖုန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်) ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်တစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းစာကိုဖတ်ရှုဖို့အသုံးပြုပေမယ့်ယခုသင်အွန်လိုင်းသတင်းစာဖတ်ရသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်ငွေသားနှင့်အတူအရာများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့အသုံးပြုပေမယ့်ယခုသင်ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်အတူပေးဆောင်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှု၌, ဒစ်ဂျစ်တယ်မှ Analog စကနေပြောင်းလဲမှုကိုသင်အကြောင်းကိုပိုမို data တွေကိုဖမ်းမိခြင်းနှင့်ဒီဂျစ်တယ်သိုလှောင်ထားခံရသည်ဟုဆိုလိုသည်။
စုစုပေါင်းမှာကြည့်သောအခါတကယ်တော့, အကူးအပြောင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအံ့သြနေကြသည်။ ကမ်ဘာပျေါတှငျအချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုလျှင်မြန်စွာတိုးပွားလာနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုဖြစ်ပါတယ်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောဒီဂျစ်တယ်သိုလှောင်ထားဂီယာနှင့် (ပုံ 1.1) ပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည် ဟူ. ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရောက်လာပြီ "ကြီးမားတဲ့ဒေတာ။ " ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်အလက်များ၏ဒီပေါက်ကွဲမှုအပြင်, ပါဝါကွန်ပျူတာမှဝင်ရောက်ခွင့်အတွက်အပြိုင်တိုးတက်မှုနှုန်း (ပုံ 1.1) ရှိပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်အလက်နှင့်အနာဂါတ်ကာလတွင်ဆက်လက်ဖွယ်ရှိ-တွေဟာကွန်ပျူတာ၏တိုးမြှင့်ရရှိနိုင်မှုဤခေတ်ရေစီးကြောင်း-တိုးမြှင့်ပမာဏ။
1.1 ပုံ: ပြန်ကြားရေးသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့်ကွန်ပျူတာပါဝါကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်လျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင်သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်မှုယခုနီးပါးသီးသန့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤပြောင်းလဲမှုများလူမှုရေးသုတေသီများအဘို့မယုံနိုင်စရာအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပါ။ ကနေအဆင်ပြေအောင် Hilbert and López (2011) ,2နှင့်5ကိန်းဂဏန်းများ။
လူမှုရေးသုတေသန၏ရည်ရွယ်ချက်, ငါဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်နေရာတိုင်းကွန်ပျူတာများဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ သာအစိုးရများနှင့်ကုမ္ပဏီကြီးမှမရရှိနိုင်ခဲ့အခန်းထဲမှာအရွယ်စက်တွေအဖြစ်ကစပြီးကွန်ပျူတာများအရွယ်အစားကျုံ့နှင့်နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရအတွက်တိုးပွားလာပြီ။ 1980 ကွန်ပျူတာသစ်တစ်ခုမျိုးကိုမမြင်စဖူးကတည်းကတစ်ခုချင်းစီကိုဆယ်စုနှစ်ပေါ်ထွက်လာ: မှာ "အရာများ၏အင်တာနက်ကို" တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများ, Laptop, စမတ်ဖုန်းများနှင့်ယခု embedded ပရိုဆက်ဆာ (ထိုကဲ့သို့သောကားများ, နာရီနှင့်အပူထိန်းကိရိယာအဖြစ် devices များအတွင်း၌ဆိုလိုသည်မှာကွန်ပျူတာများ) (Waldrop 2016) ပို. ပို. ဤနေရာအနှံ့ကွန်ပျူတာများရုံတွက်ချက်ထက်ပိုမိုပြုကြလော့ သူတို့သည်လည်း, ခံစားသိုလှောင်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်လွှင်။
သုတေသီများအဘို့, နေရာတိုင်းကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်တွင်၏ဂယက်ရိုက်ခတ်မှု, အပြည့်အဝတိုင်းတာနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်မှအာမင်ကြောင်းတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်အွန်လိုင်းကြည့်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအနေနဲ့အွန်လိုင်းစတိုးကိုအလွယ်တကူဖောက်သည်သန်းပေါင်းများစွာ၏စျေးဝယ်ပုံစံများနှင့် ပတ်သက်. မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တိကျသောဒေတာစုဆောင်းနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်သူကအလွယ်တကူကွဲပြားခြားနားသောစျေးဝယ်အတွေ့အကြုံများလက်ခံရရှိရန်ဖောက်သည်အုပ်စုများကို randomize နိုင်ပါတယ်။ ခြေရာခံခြင်း၏ထိပ်ပေါ်မှာ randomize ဖို့ဒီစွမ်းရည်ကိုအွန်လိုင်းစတိုးအဆက်မပြတ်ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်ချက် randomized run နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ တကယ်တော့သင်ကအစဉ်အဆက်ထားတဲ့အွန်လိုင်းစတိုးမှတစုံတခုကိုဝယ်ပါတယ်လျှင်, သင်၏အပြုအမူခြေရာခံထားပြီးနှငျ့သငျနီးပါးဆက်ဆက်သင်ကသိတယ်သို့မဟုတ်မဖြစ်စေ, စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွက်တစ်ဦးပါဝင်သူခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာအပြည့်အဝတိုင်းတာ, အပြည့်အဝ randomizable ကမ္ဘာတွင်မယ့်အွန်လိုင်းဖြစ်ပျက်သည်မဟုတ်, က ပို. ပို. နေရာတိုင်းဖြစ်ပျက်နေသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များပြီးသားအလွန်အသေးစိတ်ဝယ်ယူဒေတာစုဆောင်း, သူတို့ဖောက်သည် '' စျေးဝယ်အပြုအမူစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လုပ်ငန်းကိုအလေ့အကျင့်သို့လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ရောနှောဖို့အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးဆဲနေကြသည်။ အဆိုပါ "အမှုအရာများကိုအင်တာနက်" ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ်ဘာပျေါတှငျအပြုအမူ ပို. ပို. ဒစ်ဂျစ်တယ်အာရုံခံကိရိယာများကဖမ်းဆီးရမိပါလိမ့်မည်ဆိုလိုသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်သင်ရုံအွန်လိုင်းထင်မနေသင့်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များတွင်လူမှုရေးသုတေသနစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ, သင်နေရာတိုင်းထင်သင့်ပါတယ်။
ကုသမှု၏အပြုအမူနဲ့ကျပန်းရွေးချယ်မှု၏တိုင်းတာခြင်းအားဖွင့်အပြင်, ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မှာလည်းလူတွေဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အဘို့အနည်းလမ်းအသစ်များကိုဖန်တီးထားသည်။ ဆက်သွယ်ရေးဤအသစ်သောပုံစံများကိုသုတေသီများတီထွင်ဆန်းသစ်စစ်တမ်းများကို run ရန်နှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အထွေထွေအများပြည်သူနှင့်အတူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
တစ်ဦးကသံသယသည်ဤစွမ်းရည်အဘယ်သူအားမျှတကယ်အသစ်ကဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြပေလိမ့်မည်။ အကြောင်း, အတိတ်ထဲမှာဆကျသှယျဖို့လူတွေရဲ့စွမ်းရည်အတွက်အခြားအဓိကတိုးတက်လာ (ဥပမာကြေးနန်းတှေရှိခဲ့တယျဖြစ်ပါတယ် (Gleick 2011) ), နှင့်ကွန်ပျူတာများကို 1960 ကတည်းကအကြမ်းဖျင်းတူညီမှုနှုန်းမှာပိုမိုမြန်ဆန်လာပြီပြီ (Waldrop 2016) ။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ဒီသံသယပျောက်ဆုံးနေသည်တစ်ဦးအခြို့သောအချက်မှာအတူတူပင်ပိုမိုကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်လာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤတွင်ကျွန်မသဘောကျတယ်တစ်ခုတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရဲ့ (Halevy, Norvig, and Pereira 2009; Mayer-Schönberger and Cukier 2013) ။ သင်တစ်ဦးမြင်း၏ပုံရိပ်ကိုဖမ်းယူနိုင်လျှင်, ထို့နောက်သင်တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်ရှိသည်။ သငျသညျဒုတိယနှုန်းဟာမြင်း 24 ပုံရိပ်တွေကိုဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်လျှင်, ထို့နောက်သင်တစ်ဦးရုပ်ရှင်ရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ရုပ်ရှင်ဓါတ်ပုံများ၏ရုံတစည်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခုသာအစွန်းရောက်သံသယဓါတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ရှင်အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းဆိုကြသည်လိမ့်မယ်။
သုတေသီများရုပ်ရှင်ပညာမှဓာတ်ပုံကနေအကူးအပြောင်းကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့နေတဲ့ပြောင်းလဲမှုအောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်၌ရှိကြ၏။ ဤပြောင်းလဲမှုသို့သော်ကျနော်တို့အတိတ်တွင်လေ့လာသင်ယူကြအရာအားလုံးကိုလစ်လျူရှုသင့်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ ဓာတ်ပုံများ၏အခြေခံမူရုပ်ရှင်ပညာ၏သူတွေကိုအကြောင်းကြားသကဲ့သို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 100 ကျော်ကတီထွင်ခဲ့ကြကြောင်းလူမှုရေးသုတေသန၏အခြေခံမူကိုနောက်နှစ်ပေါင်း 100 ကျော်ကရာအရပျကိုယူပြီးလူမှုရေးသုတေသနအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အပြောင်းအလဲကိုလည်းငါတို့ပဲအတူတူပါပဲလုပ်နေတာမထားသင့်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ အဲဒီအစားကျနော်တို့ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်၏စွမ်းရည်များနှင့်အတူလွန်ခဲ့သော၏ချဉ်းကပ်မှုပေါင်းစပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ယောရှုသည် Blumenstock နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ၏သုတေသနအချို့ဒေတာသိပ္ပံမခေါ်စေခြင်းငှါ, ဘယ်မည်သောအကောင်နှင့်ရိုးရာစစ်တမ်းသုတေသနတစ်ခုအရောအနှောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအပါဝင်ပစ္စည်းများနှစ်ယောက်စလုံးလိုအပ်သောခဲ့ကြသည်: မသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်စစ်တမ်းတုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများဆင်းရဲမွဲတေမှု high-resolution ခန့်မှန်းချက်ထုတ်လုပ်ရန်လုံလောက်သောခဲ့ကြသည်။ ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်, လူမှုရေးသုတေသီများဒီဂျစ်တယ်ခေတ်၏အခွင့်အလမ်းများအားသာချက်ယူနိုင်ရန်အတွက်လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်ဒေတာသိပ္ပံမှသည်အတွေးအခေါ်များပေါင်းစပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်; တစ်ဦးတည်းမချဉ်းကပ်မှုအလုံအလောက်ရှိလိမ့်မည်။